Otu esi agwa ihe dị iche n'etiti iko na kristal - Nkuzi
ipad agaghị jikọọ na ịntanetị
iphone araparaghị ọrụ
egwu agaghi egwu na iphone
ikuku ipad m agaghị akwụ ụgwọ
Otu esi ekwu ihe dị iche n'etiti iko na kristal
Kedu ihe dị iche n'etiti kristal na iko? .
A: Azịza ya bụ c. Crystal nwere ọdịnaya ndu nke opekata mpe pasent 24 ebe iko enweghị ndu.
Okwu izugbe: A na -akpọ tumblers echekwara na kọbọd kichin ọtụtụ ndị mmadụ dị ka enyo enyo kwa ụbọchị. Ihe ndị a nwere àgwà siri ike, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke na -agaghị emebi emebi nke na -enyere ha aka iguzogide narị nsụcha efere na mgbada si na tebụl na tebụl. Iko iko e debere maka ọmarịcha iko-iko nwere atụmatụ etched na mkpịsị dị gịrịgịrị, dịka ọmụmaatụ-a na-akpọkarị kristal. Mana ọ bụ kristal n'ezie?
Crystal bụ n'ezie ụdị iko a na -enwe ekele maka nkọwa ya nke ọma yana ntụgharị ya na idoanya ya. Iko, n'akụkụ tụgharịrị, dịtụ ntakịrị. Ọ nwere ike ịdị aghụghọ ịgwa ha iche na nlele maka onye na -ahụkarị. Ọ bụrụ na ị na -eche maka ịzụrụ ihe dị oke ọnụ iko, agbanyeghị, ọ gaghị afụ ụfụ ịmara ọdịiche dị n'etiti abụọ a iji zụọ ahịa nke ọma.
Na -atụgharịgharị ọkụ (dịka ọmụmaatụ)
nwekwaruphu; rim nwere ike ime ka ọ dị ezigbo mkpa
Ọ dị larịị ma ọ naghị abụkarị efere efere
nhọrọ ndu na ndu
Oké ọnụ ($$$)
Ọ na -adịkarị ọnụ ala ($)
Ọ nweghị ihe na-emebi emebi na igwe efere efere
Iko Borosilicate na-enye nhọrọ iko na-adịgide adịgide dị elu
E nwere ọtụtụ ụdị iko, ya mere ọ ga -ezuru gị ikwu na akụkọ a na -eku ume n'elu ihe ndị bụ isi. Nke ahụ kwuru, uru izizi nke iko bụ na ọ naghị emebi emebi, ọ pụtakwara na ọ gaghị enweta aromas kemịkal ma ọ bụ corrode ma ọ bụrụ na ị na-asacha ya na igwe efere efere gị.
Ọtụtụ iko mmanya iko ga -enwe egbugbere ọnụ na rim maka ịdịte aka nke na -abụghị ihe a na -achọsi ike maka ịnụ ụtọ mmanya. Nke a bụ ihe mere iko mmanya iko ji adịkarị ka a na -ere ya ma na -ere ya ọnụ ala karịa. Otú ọ dị, enwere otu ụdị iko nwere nnukwu ike na nke ahụ bụ iko borosilicate. Ọ nwere ogologo anwụ ngwa ngwa, okpomọkụ na ọkọ na -eguzogide - ọ bụrụ na ị maara nnukwu iko kọfị bodum, a na -eji borosilicate eme ha.
Uru nke Crystal
Crystal bụ ntakịrị okwu na -eduhie eduhie, ekwesịrị ịkpọ ya ka ọ bụrụ iko ndu (ma ọ bụ iko ịnweta) n'ihi na enweghị usoro kristal. Uru nke kristal bụ na ọ nwere ike ịgbaji dị gịrịgịrị. Nke a bara uru nke ọma maka iko mmanya dị na rim/onu nke iko ebe ọ nwere ike ịdị gịrịgịrị, mana ọ ka siri ike.
Iko iko na -atụgharịkwa ọkụ, nke na -achọsi ike mgbe ị na -a wineụ mmanya gị. E nwere ụdị kristal ọzọ nke ga-atọ ndị mmadụ ụtọ na ndị na-asa efere akpọrọ kristal na-enweghị ntụpọ. A na -emekarị ya na magnesium na zinc. Kristal na-enweghị isi abụghị naanị na-adịgide adịgide, mana ọtụtụ na-echekwa efere efere. Ọ bụghị na m ga -etinye otu n'ime efere efere m, mana ụlọ nri na -etinye, yabụ ị nwekwara ike!
Crystal na-eduga Crystal
N'ihe banyere ịdị mma, ụdị kristal abụọ ahụ-isi na enweghị ntụpọ,-nwere ike tinye ya n'ime ezigbo enyo. Na omenala, a na -ebute iko kristal niile ka ọtụtụ n'ime ya ka dị. Ọ dịghị ize ndụ dị ka iko n'ihi na mmanya anaghị ekpughere ya n'ite enyo ruo ogologo oge ka ọ ghara ịdaba. Nke a na -eme naanị na nchekwa ogologo oge, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị ga -echekwa whiskey ihe karịrị otu izu n'ime mkpọsa mmanya kristal.
Ọ bụghị Crystal niile ka ahaziri
Na UK, ngwaahịa iko ga -enwerịrị opekata mpe 24%. Pasent nke ihe ndị metụtara ịnweta mmiri ga -emetụta ike kristal. Na US, agbanyeghị, enwere obere iwu jikọtara ya na iko kristal na ndị nrụpụta nwere ike iji okwu ahụ mee ihe n'ụzọ na -adịghị mma.
Kedu nke ka mma?
Mgbe ị na -ahọrọ iko mmanya, ụzọ kachasị mma ịmalite bụ ichebara ọnọdụ onwe gị echiche.
Ọ bụrụ na ị kpọrọ ihe ịsacha aka asị, chọọ kristal na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ iko ọkọlọtọ
Ọ bụrụ na ị na -agbaji ihe ugboro ugboro, gaa maka iko wee na -eme oriri.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwe nke kacha mma, nweta kristal ejiri aka mee
Ọ bụrụ na ị hụrụ nne gị n'anya, zụta kristal ya.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka ma ọ bụ nwamba, mgbe ahụ ị nwere ike chọọ ịhọrọ azịza iko iko dị ọnụ ala ma ọ bụ iko na -enweghị ntụpọ nke na -adịchaghị ike ịkụ. Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ịnwere ike ịnwe naanị 1 ma ọ bụ 2 kristal kristal maka ekele mmanya mgbe ụfọdụ, ha na -eme nnukwu mgbanwe na ahụmịhe na -atọ ụtọ, ọbụlagodi na ọ bụ naanị mmetụta.
A na -ejikarị kristal eme ihe dị ka okwu maka iko iko ọ bụla nwere ụdị mara mma karịa iko ma ọ bụ ite jelii a na -eji kwa ụbọchị. Ka o sina dị, ọ bụghị akara ngosi ziri ezi mgbe niile.
Idebe ụkpụrụ: Dabere na John Kennedy, onye isi ọrụ nka na Waterford na Waterford, Ireland, enwere ntuziaka akọwapụtara nke ọma maka ihe bụ ezigbo kristal. Kennedy na -ekwupụta ụkpụrụ atọ bụ isi maka kristal: ọdịnaya nke nwere ihe karịrị pasent 24, njupụta karịrị 2.90 yana ntụnyere nke 1.545.
E guzobere nkọwa ndị a na 1969 site na European Union, isi azụmaahịa nke mba 15 Europe. United States, Kennedy na -ekwu, emebebeghị ụkpụrụ nke ya, mana na -anabata ọkọlọtọ Europe maka ebumnuche kọstọm.
Na -ebute ụzọ: Dị ka Kennedy si kwuo, isi ihe dị na kristal bụ ndu. Omenala kristal Waterford nwere ọdịnaya nwere ihe dịka 32 %. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe ịchọ mma dị mma nwere ike ịnwe ndu, ihe ọ bụla dị n'okpuru ọkọlọtọ pasent 24 anaghị ewere kristal. Ngwa iko a na -ahụkarị nwere ihe dịka 50 % silica (ájá), mana enweghị ndu.
Ọ dị adị? Ịmata ezigbo kristal na wannabes kristal nwere ike isi ike. Dị ka Kennedy si kwuo, ọ bụ naanị ọkachamara nwere ike ịchọpụta ezigbo kristal site n'ihe anya na -ahụ. Agbanyeghị, enwere njiri mara ole na ole na -enyere aka n'ịchọpụta ihe dị adị. N'ihi ọdịnaya dị elu dị elu, mgbaaka kristal na -emetụ ya aka nke ukwuu ma dị arọ karịa iko enyo. Ọ na -enwekwa ụcha ọlaọcha. Mgbe ejidere ya n'ọnọdụ ziri ezi, ntụgharị na mgbasa nke ìhè sitere na kristal na -emepụta eke na egwurugwu.
Ọdịiche dị n'etiti Falcon na egbe